Anamol Feeds Pvt. Ltd:: FAQ
StartaNew Poultry firm
कुखुराको खोरभित्र जाँदा लगाएको जुत्ता वा चप्पल फुकाली फार्मभित्र राखेको बुट, लुगा तथा एप्रोन लगाएर मात्र जाने । कुखुराको फार्मभित्र २÷३ लट कुखुरा भएमा शुरुमा जाँदा सानो चल्लामा जाने र अन्तिममा ठुलो वा रोग शंका भएकोमा जाने । फार्मभित्र पस्नु पुर्व पूरा स्प्रे गरेर मात्र जाने । फार्मभित्र अनाबश्यक मानिसलाई नल्याउने । यदि जानु परेमा
Diseases and Solutions Lichi [ Hydro-Pericardium Syndrome]
लक्षणहरु यो रोग ३–६ हप्ताको कुखुरालाई लाग्छ । कुखुराको एक्कासि मृत्युदर बढ्छ, प्राय १ महिनाभित्र २०–५० प्रतिशत सम्म मृत्युहुने सम्भावना हुन्छ । दाना पानी अलि कम खान्छ । कुखुरा चिरेर हेर्दा कलेजो ठुलो, पहेंलो तथा मृगौला सुन्निएको, पँहेलो रङको देखिन्छ र मुटु वरिपरि पानी जमेको हुन्छ । रोकथाम समयमा खोप
Diseases and Solutions Coccidiosis
लक्षणहरु कुखुराको प्वाँख खस्रो हुने । दिसामा रगत छेर्ने । आन्द्रामा हुने कक्सिडियोसिसमा शरीर पँहेलो हुने भइ छेर्ने हुन्छ । यसमा रगत मिसिएको हुनसक्छ र मृत्युदर भने ८–१०% सम्म हुन्छ । रोकथाम कुखुराको सोत्तर सुख्खा हुनुपर्दछ । बढी चिस्यानमा कक्सिडियोसिसको सम्भावना धेरै हुने गर्दछ । सोत्तर चिस्यान छ भने ५–७
Diseases and Solutions Colibacillosis
लक्षणहरु दाना कम खानो र झोक्राएर बस्ने । सिउर फिक्क हुने र झोक्राएर बस्ने । हरियो वा सेतो पातलो सुलु छेर्ने । मलद्धार वरिपरि सुली लटपटिने । रोकथाम प्राबिधिकको सिफारिसमा एन्टिबायोटिकहरु खुवाउने । पानी शुद्धीकरण गर्ने औषधि राख्ने । तुरुन्त पशु डाक्टरलाई जानकारी गराई निजको सल्लाह अनुसार उपचार
Diseases and Solutions Pulloram or Salmonellosis
लक्षणहरु चल्लाले सेतो छेर्ने र मलद्धारमा सुली टाँसिएको हुन्छ । दानापानी कम खान्छ, कुखुरा अलि झोक्राएको देखिन्छ । मृत्युदर १०–४०% सम्म हुने सम्भावना रहन्छ । रोकथाम औषधि उपचार प्राबिधिक सर–सल्लाहमा गर्नुपर्छ ।
Diseases and Solutions CRD
लक्षणहरु ख्यार–ख्यार आवाज सुनिन्छ बिशेष गरेर रातिमा बढी सुनिन्छ । दानापानी कम खान्छ, कुखुरा झोक्रएको देखिन्छ । अन्य रोगको संक्रमण हुने सम्भावना बढ्छ । रोकथाम उमेर ऋौषधिको नाम मत्रा पहिलो हप्ता Neomycin+Doxycydine (Neodox Forte, Binodox etc) or Tiamutin 45% १ ग्राम प्रति ४ ली. पानीमा लगातार ५ दिनसम्म ०.५ ग्राम प्रति १००
Diseases and Solutions Rani Khet
लक्षणहरु यस रोगले प्रतक्ष श्वास प्रणलीमा असर गर्नेहुनाले प्रभाबित कुखुरामा सास फेर्न केही कठिनाइ महशुस गर्दछ । चुच्चो र नाकबाट पानी जस्तो बाक्लो पदार्थ निस्कने गर्दछ । क्रमिक रुपमा हरियो छेर्ने, टाउको र घाँटी सुन्निने हुन्छ । अत्याधिक संक्रमणमा कुखुरा काप्ने, घाँटी बटार्ने र गोलो चक्कर लगाएर घुम्ने गर्दछ । मृत्यु
Diseases and Solutions Gambaro
लक्षणहरु यो रोग एक्कासी देखापर्न सक्छ । रोग लागेका कुखुराहरु झेक्राएर बस्ने, प्वाँख गुज्मुजिएको हुनु, मलद्धार वरिपरि सुली टाँसिएको देख्न सकिन्छ । कुखुरा टाउको झुकाएर बसेको हुन्छ र साथै ज्वरो आउने र आँखाबाट पानी बगेको हुन्छ । कुखुराले पहेंलो छेर्ने गर्छ । कुखुरा १०–२५% सम्म मर्ने गर्छ र रोग लागेको
क्त. सं. दिन रोगको नाम भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने बिधि÷मात्रा १ ३–५ दिन लिचि Nobilis Fav/ IBH/HPV Killed Vaccine ०.२ मि.ली. छालामुनी २ ५–७ दिन रानीखेत F1/B1 १ थोपा आँखा वा नाकमा राख्ने ३ १२–१४ दिन गम्बारो IBD Intermediate १ थोपा आँखा वा नाकमा राख्ने ४ १९–२१ दिन गम्बारो IBD Intermediate दुध पाउडर पानीमा मिसाइ दिने
कुखुराको फर्ममा रोग फैलिन नदिन तर्जुमा गरिने सुरक्षा ब्यावस्थालाई जैविक सुरक्षा भनिन्छ । जैबिक सुरक्षा भनेको रोगको कारक तत्वलाई पंक्षिबाट तथा पंक्षिलाई रोगको कारक तत्वबाट टाढा राख्ने व्याबस्थालाई जनाउँदछ । कुखुरामा रोग लागेर उपचार गर्र्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिने उपाय अपनाउन राम्रो हुन्छ, जसलाई एचभलतष्यल ष्क दभततभच तजबल अगचभ भन्ने गरिन्छ । जैबिक सुरक्षका प्रकारहरु